कसका सन्तान कहाँ ?(नेपालको राजनीति परिधी भित्र) | मरुभूमीको कोसेली nepalkuwait
कसका सन्तान कहाँ ?(नेपालको राजनीति परिधी भित्र)
Posted on फ्रेवुअरी 8, 2010 by आर. बी. बुढाथोकी	सुरूआत उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री सुजाता कोइरालाबाटै गरौँ । उनका छोरा आन्द्रे हास जोस्टको बसोबास जर्मनीमा छ । छोरी मेलानी जोस्टले बंगलादेशी नागरकि रुबेल चौधरीसँग बिहे गरेकी छन् । विश्वविद्यालय शिक्षाका लागि लन्डन पुगेकी उनी आमा सुजाता मन्त्री भएयता पतिसहित काठमाडौँमा रहे पनि सिंगापुरमा व्यापार व्यवसाय गर्ने चाँजापाँजो मिलाउँदै छिन् । सुजाता मात्रै होइन, नेपाली राजनीतिमा लामो समयदेखि केन्द्रीय भूमिकामा रहेका कोइराला परविारका सदस्यहरू धेरैले आफ्ना छोराछोरीलाई विदेशमै शिक्षादीक्षा दिलाएका छन् । कतिपयको काम-व्यापार उतै छ भने केहीले बाहिरै लगनगाँठो पनि कसिसकेका छन् । कोइराला परविारको मात्रै के कुरा रु नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टीका केन्द्रीय समितिका सदस्यहरूको नामावली हेर्ने हो भने अधिकांशले आफ्ना छोराछोरीलाई शिक्षादीक्षाका लागि मुलुकबाहिर पठाएका छन् । माओवादी नेताहरू पनि विस्तारै गाउँबाट सदरमुकाम, सदरमुकामबाट सहर र क्रमशः काठमाडौँका महँगा निजी विद्यालयतर्फ आकषिर्त हुँदै छन् । उनीहरूमध्ये केहीले त विदेश पठाउन पनि थालिसकेका छन् । यसले नेताहरू राम्रो शिक्षादीक्षाको अवसर मुलुकभित्रै सिर्जना गरी अवस्था सुधार्न तत्पर छैनन् भन्ने देखाउँछ ।
कतिपयले आफ्नो राजनीतिक परचिय र उचाइका आधारमा यस्ता अवसर छोप्ने गरेका छन् । प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालका छोरा सौरभ र छोरी सुमन दुवैले भारतमा पढ्ने मौका पाए । सुमनले भारतीय दूताबासको छात्रवृत्तिमा अल इन्डिया इन्स्िटच्युट अफ मेडिकल साइन्सेजमा पढ्ने अवसर पाइन् । उनको आईएस्सीमा प्रथम श्रेणीको अंक पनि थिएन । त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा सर्वोत्कृष्ट भएका विद्यार्थीले नपाएर सुमनले पाएको उक्त अवसरबारे सार्वजनिक रूपमै प्रश्न उठाइएको थियो । एमाले उपाध्यक्ष वामदेव गौतमका छोरा हरशिदेव गौतमको कथा पनि उस्तै छ । ०५१ सालमा पार्टीका लागि प्राप्त छात्रवृत्ति कोटामा उनलाई राखियो । सहिदका छोराछोरीलाई प्राथमिकता दिने पार्टीको नीतिविपरीत उनलाई चीन पठाइएकामा पार्टीभित्र विरोध पनि भएको थियो । चिकित्साशास्त्र पढ्न चीन गएका हरशि र्फकंदा भने इन्जिनियर भएर आए र काठमाडौँ महानगरपालिकामा जागिरे भए । हाल उनी उपत्यका नगर विकास समितिमा इन्जिनियर छन् ।
कतिपय नेताका छोराछोरीलाई दूताबासहरूले पढाइदिने गरेका छन् । ूनेपालजस्तो देशमा जहाँ लगातार हङ् पार्लियामेन्ट छ, सरकार टिकाउने कि गिराउनेमा यस्ता कुराले काम गर्दैनन् भन्ने के ग्यारेन्टी रुू प्रा कृष्ण खनाल भन्छन्, ूकेटाकेटीको मायाले सबैलाई प्रभाव पार्छ । सार्वजनिक जिम्मेवारीमा जाने व्यक्तिले सार्वजनिक र निजी जीवनको व्यवहार र भूमिका छुट्याउनुपर्छ ।ू
दूताबासहरूकै सौजन्यमा सीपी मैनालीले छोरालाई अमेरकिा र छोरीलाई चीन पठाएका छन् भने विद्या भण्डारीका दुवै छोरी भारत पढ्न गए । अमिक शेरचनका एउटा छोरा छात्रवृत्तिमै अमेरकिा पढ्न गएका छन् । आफ्नो राजनीतिक शक्तिकै कारण छोराछोरीलाई दूताबासको सहयोगमा छात्रवृत्ति दिलाउनेमा रामशरण महत, प्रकाशचन्द्र लोहनी, अर्जुननरसिंह केसी, भरतमोहन अधिकारी, चक्रप्रसाद बाँस्तोलासमेत पर्छन् ।
धेरैजसो देशका दूताबासहरूले दिने छात्रवृत्तिको प्रक्रिया पारदर्शी छैन । छनोट प्रक्रियामा नेपाली प्रतिनिधिलाई सामेल गराइएको पनि हुँदैन । पाकिस्तान, बंगलादेश र भारत यस मामलामा बढी आलोचित छन् । उनीहरूका छात्रवृत्तिका लागि स्वतन्त्र छानबिन समिति हुनुपर्ने माग विभिन्न तहबाट भइरहेको छ । तर, राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वले आफ्नो मौका गुम्न नदिन त्यसतिर ध्यान दिएका छैनन् । ूदूताबासका कोठाभित्र निर्णय गर्ने परपिाटीलाई बन्द गर्न सक्नुपर्छ,ू त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक खनाल भन्छन् ।
कसका सन्तान कहाँ ?
एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालका छोरा निर्भीक चित्रकार खनाल अमेरकिामा पढ्दै छन् । उपाध्यक्ष वामदेव गौतमकी छोरी अजिता अमेरकिामै विवाह गरी बसेकी छन् । गौतमका ज्वाइँ प्रकाश भेटवाल पनि एमाले नेता जागृत भेटवालका छोरा हुन् । अर्का उपाध्यक्ष अशोक राईका एक छोरा अमेरकिामै छन् ।
अर्की उपाध्यक्ष एवं रक्षामन्त्री विद्या भण्डारीकी छोरी उषाकिरण जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा स्नातकोत्तर गरेर हालै काठमाडौँ आएकी छन् भने अर्की छोरी निशाकुसुम भारतमै एमबीबीएस पढ्दै छन् । महासचिव ईश्वर पोखरेलका छोरा सिर्जन अमेरकिा पढ्न गएका छन् भने सचिव विष्णु पौडेलकी छोरी थाइल्यान्डमा एसियन टेक्निकल इन्स्िटच्युट -एटीआई)मा वाणिज्यशास्त्रमा स्नातकोत्तर पढ्दै छिन् । उनका छोरा विवेक पनि अध्ययनका लागि हालसालै बेलायत गएका छन् ।
अमृतकुमार बोहरा र अष्टलक्ष्मी शाक्यका छोरा विश्वास अमेरकिाबाट भर्खरै फर्केका छन् भने राजेन्द्र पाण्डे र सुरेन्द्र पाण्डेका एक-एक छोरा अस्ट्रेलियामा छन् । राजेन्द्रका तीन छोरामध्ये एउटा मात्र नेपालमा छन् । उनी पनि काठमाडौँमा शैक्षिक परामर्श संस्था खोली विदेशी कलेजहरूलाई विद्यार्थी निकासी गर्दै छन् । प्रकाश ज्वालाका छोरा पनि भर्खर बेलायत पढ्न गएका छन् भने रघु पन्तले भाइलाई अमेरकिा पठाएका छन् । उनका दुई छोरी सानै छन् । महेन्द्र पाण्डेकी छोरी अमेरकिामा छन् । कणर्ालीका एमाले नेता गोरख बोगटीले आफ्ना छोरालाई बूढानीलकण्ठ स्कुलमा विद्यालय शिक्षा दिलाएर उच्च शिक्षाका लागि बेलायत पठाए भने सुदूरपश्चिमका नेता भीम रावलले पनि जेठो छोरा प्रभातलाई छात्रवृत्तिमा भारतमै पढाए । बाबु गृहमन्त्री भएकै बेला उनले हालै सशस्त्र प्रहरीमा चिकित्सकको जागिर सुरु गरेका छन् ।
कांग्रेस उपसभापति एवं संसदीय दलका नेता रामचन्द्र पौडेलका छोरा चिरन बेलायतको रेडिङ् सहरमा इन्जिनियर छन् भने एक छोरी अमेरकिामा चिकित्साशास्त्र पढ्दै छिन् । कांग्रेसकै अर्का नेता तारण्िाीदत्त चटौतका छोरा हेमप्रकाश बेलायतमा छन् । उनी चिकित्सा विज्ञानमा स्नातकोत्तर पढ्दै छन् ।
अर्जुननरसिंह केसीका छोरा ओमश्री केसी अमेरकिामा व्यवस्थापनमा स्नातक गर्दै छन् भने छोरी अनुजा नेपाली इन्जिनियरसँग विवाह गरी अमेरकिामा बसेकी छन् । उनका दुई छोरी भने यतै छन् । एउटीसित गगन थापाले विवाह गरेका छन् ।
कांग्रेसका तर्फबाट पटकपटक अर्थमन्त्री भएका रामशरण महतका दुवै छोरा अमेरकिामा छन् । तीमध्ये एक रक्षक महत कर्पोरेट कानुन व्यवसायीका रूपमा काम गररिहेका छन् । उनी पनि उच्च शिक्षाकै खोजीमा अमेरकिा पुगेका थिए । गोविन्दराज जोशीका छोरा दीपक जोशी १४ वर्षदेखि अमेरकिामा छन् । उनी त्यहाँको सियाटल सहरमा कम्युनिकेसन डिपार्टमेन्टमा काम गर्छन् । कान्छो छोरा दिनेश र उनकी श्रमती रक्षा कहिले अस्ट्रेलिया त कहिले अमेरकिा गररिहेका छन् । ती देशमा उनको आफ्नै व्यापार छ । छोरी रमा भट्टराई पनि अमेरकिामै एक विद्यालयमा शिक्षिका छिन् ।
अर्का नेता लक्ष्मण घिमिरेका दुई छोरी अस्ट्रेलियामा छन् । चक्र बाँस्तोलाकी छोरी गरमिा बेलायत र सुम्निमा चीनमा छन् । त्यसअघि उनीहरू अमेरकिामा थिए । पूर्वअर्थमन्त्री महेश आचार्यका पनि एक छोरा अमेरकिा र अर्का चीनमा छन् । नरहर िआचार्यकी एक छोरी पनि अस्ट्रेलियामा छिन् । आमोदप्रसाद उपाध्यायका छोरा राजीव क्यानाडामा छन् भने दीपकुमार उपाध्यायकी एक छोरी देशबाहिरै छिन् । विनयध्वज चन्दकी एक छोरी अमेरकिामा छिन् । प्रकाशमान सिंहका एउटा छोरा दिल्लीमा स्नातक पढ्दै छन् । कांग्रेस नेतृ उमा अधिकारीका छोरा अमेरकिामा छन् । प्रकाशमान गणेशमानका छोरा हुन् ।
आफ्ना छोराछोरीलाई सकेसम्म मुुलुकको दुरावस्थाबाट टाढा राख्ने प्रवृत्ति माओवादी नेताहरूमा पनि सर्दै छ । हरभिक्त कँडेलका छोरा प्रशान्त बंगलादेशमा एमबीबीएस पढ्दै छन् भने लीलामणि पोखरेलका छोरा विप्लव चीनमा । घनश्याम शर्मा पौड्यालका कान्छा छोरा बेलायतमा छन् । अमिक शेरचनका दुई छोरा श्रमिक र क्रमिश अनि छोरी अमृता परविारसहित विदेशमा बस्छन् । श्रमिक अमेरकिा, क्रमिश जापान र अमृता बेलायतमा छन् ।
अधिकांश माओवादी नेताका छोराछोरी काठमाडौँका महँगा स्कुलमा पढिरहेको माओवादीकै भ्रातृसंगठन अनेरास्ववियु -क्रान्तिकारी)का अध्यक्ष लेखनाथ न्यौपाने बताउँछन् । क्रान्तिकारीको अध्ययन अनुसार, टोपबहादुर रायमाझीका छोरा सन्दीप विदेश जाने तयारीमा भाषा पढ्दै छन् । उनी बुटवलस्िथत मणिमुकुन्द उच्च माविबाट १२ पढेका हुन् । छोरी सन्ध्या पनि त्यहीँ पढ्दै छिन् । देव गुरुङका जेठा छोरा विजयले सरकारी छात्रवृत्तिमा तानसेनको लुम्बिनी मेडिकल कलेजमा एमबीबीएस पढ््ने मौका पाएका छन् भने कान्छा विशाल ललितपुर, पुलचोकस्िथत त्रिपद्म माविमा १० कक्षा पढ्दै छन् । माओवादी सभासद् खिमलाल देवकोटाका दुई छोरा सिद्धार्थ वनस्थली स्कुलमा पढ्छन् भने नन्दकुमार प्रसाईंले छोरा विजय र छोरी ऐश्वर्यलाई ललितपुरकै लिटिल एन्जल्समा पढाएका छन् । यसैगरी, वर्षमान पुनका छोरा सेन्ट जेभियर्समा पढ्दै छन् भने हितमान शाक्य, हेमन्तप्रकाश ओली र जनार्दन शर्माले ज्ञानकुञ्ज स्कुलमा पढाइरहेका छन् । शक्तिबहादुर बस्नेतकी छोरी संगम ललितपुरकै लुभुस्िथत डनबस्को स्कुलमा पढिरहेकी छन् भने नारायण शर्माका छोरा कान्तिपुर इन्जिनियरङि् कलेजमा पढ्दै छन् । कुलप्रसाद केसीकी छोरी शंखमूलस्िथत प्यासिफिक एकेडेमीमा छन् भने पोस्टबहादुर बोगटीकी छोरी प्रभा श्वेत सदन स्कुलमा पढ्छिन् । हरबिोल गजुरेलकी छोरी भारतमा पढेर फर्केकी छन् ।
अन्य तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका नेता सर्वेन्द्रनाथ शुक्लका एक छोरा अमेरकिाको बोस्टनमा छन् । पूर्वप्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाका नाति सिद्धार्थ थापा सुरुमा अमेरकिा गए । त्यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विषयमा स्नातक पढ्न थालेका उनी पढाइ सन्तोषजनक नभएपछि बीचमा बेलायत पुगेका थिए । पछिल्लोपल्ट फेर िअमेरकिा हान्निएका छन् । पशुपतिशमशेर राणाकी दुई छोरीमध्ये एक रुसी नागरकिसँग विवाहित छिन् भने अर्की देवयानीले भारतीय नागरकिसँग दाम्पत्य अपनाएकी छन् ।
जनशक्ति पार्टीका प्रकाशचन्द्र लोहनीकी छोरी अमेरकिामा छिन् भने कमल थापाका चार सन्तानमध्ये जेठी छोरी प्रसिद्धि थाइल्यान्डमा छिन् । सद्भावना नेतृ सरतिा गिरीकी छोरी इतिशा लन्डनमा छिन् । नेकपा मालेका महासचिव सीपी मैनालीका छोरा सरोज अमेरकिामा इन्जिनियरङि् पढ्दै छन् भने छोरी प्रभा चीनमा चिकित्सा विज्ञान ।
Filed under: समचार « रम्विका कहाँ छिन ?भारतीय दुतावास गेट वाट वेपत्ता ब्लू फिल्ममा नेपाली अनुहार ……….! »